Indlwana ye-Shalom - I-Airbnb
Elkton, South Dakota, i-United States
Indawo esepulazini ibungazwe ngu-Karen
I-Shalom Cottage iyindlu eyakhiwe ngamapulangwe encane enakho konke okudingayo ukuze usinde! Kuhlanganisa ikhishi eline-frig, i-microwave, & i-toaster oven, ipuleti elishisayo, indlu yokugezela & ishawa! Sinombhede we-queen Murphy ongahlala phansi noma uwufake phezulu. Hlala kuvulandi kusihlwa futhi ujabulele ingxoxo yezinyoni & ama-sunsets amahle.
Futhi, uma unenja(izinja) ezayo, sinezindleko ezengeziwe ezingu- $ 10 inja ngayinye ubusuku ngabunye. Ngizocela leyo mali kuwe uma ukubhukha sekwenziwe.
Lena indawo ekahle kakhulu yabantu abangaphandle abalula! Ikamelo elilodwa elinakho konke okudingayo! Ikhishi, umbhede omkhulu we-Murphy, indawo yokuhlala, indawo yokudlela konke endaweni eyodwa! Indlu yokugezela neshawa zixhunyiwe ekamelweni elilandelayo! Yisakhiwo sayo esineveranda yaso enamathele kakhulu!
Ngitholakala nganoma yimiphi imibuzo ongaba nayo.